हिन्दु धर्मका सोह्र संस्कार : गर्भाधानदेखि अन्त्येष्टिसम्म
Saturday,11 July, 2020 | २७ असार २०७७
अपडेटः २७ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np
समाज कला / साहित्य
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २८ मंसिर
हिन्दु धर्म भारतवर्षको प्रमुख धर्म हो । यसमा पवित्र सोह्र संस्कार रहेका छन् । हिन्दु धर्मको प्राचीनता एवं विशालताका कारण नै यसलाई ‘सनातन धर्म’ भनिएको हो ।
बौद्ध, जैन, इसाई, इस्लाम आदि धर्म जसरी हिन्दु धर्म कोही एक विशेष व्यक्तिले स्थापना गरेको धर्म होइन । यो त प्राचीनकालदेखि चल्दै आएका विभिन्न धर्म र आस्थाहरूको बृहत् सम्मिश्रण हो ।
महर्षि वेदव्यासका अनुसार मनुष्यको जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न सोह्र पवित्र संस्कार सम्पन्न गरिन्छन् ।
गर्भाधान संस्कारबारे महर्षि चरकले भनेका छन् कि मनलाई प्रसन्न र पुष्ट राख्नु गर्भधारणका लागि आवश्यक छ । यस कारण महिला र पुरुषले सधैँ उत्तर भोजन गर्नु जरुरी छ भने प्रसन्नचित्त रहनुपर्छ ।
गर्भको उत्पत्तिको बेला महिला र पुरुषको मन उत्साह, प्रसन्नता र स्वस्थताले भरिपूर्ण हुनुपर्छ । उत्तम सन्तान प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला गर्भाधान संस्कार गर्नुपर्छ ।
मातापिताका रज र वीर्यको संयोगबाट सन्तान उत्पत्ति हुन्छ । यो संयोगलाई नै गर्भाधान भनिन्छ । महिला र पुरुषको शारीरिक (यौन) सम्पर्कलाई गर्भाधान संस्कार भनिन्छ । गर्भस्थापनापछि अनेक प्रकारका प्राकृतिक दोषको आक्रमण हुन सक्छ, तीबाट बच्नका लागि यो संस्कार गरिन्छ, जसबाट गर्भ सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास छ ।
विधिपूर्वक गरिएको संस्कारयुक्त गर्भाधानबाट असल र सुयोग्य सन्तान जन्मिने हिन्दु शास्त्रमा उल्लेख छ ।
२. पुंसवन संस्कार
पुंसवन संस्कार गर्भधारणको तीन महिनापछि गरिन्छ । गर्भ रहेको तीन महिनापछि गर्भस्थ शिशुको मस्तिष्क विकसित हुन थाल्छ । यस समय पुंसवन संस्कारद्वारा गर्भमा रहने शिशुमा संस्कारको आधार तयार पारिन्छ । शिशुले गर्भमै सिक्न सुरु गर्छ । यसको उदाहरणका रूपमा अभिमन्युलाई लिन सकिन्छ, जसले आमा द्रौपदीको गर्भमा नै चक्रव्यूहको शिक्षा लिएका थिए ।
३. सीमन्तोन्नायन संस्कार
सीमन्तोन्नायन संस्कार गर्भ रहेको चौथो, छैठौँ र आठौँ महिनामा गरिन्छ । यस समय गर्भमा हुर्किरहेको बच्चा सिक्न तयार भइरहेको हुन्छ । उसमा राम्रा, असल गुण, स्वभाव र कर्मको ज्ञान आओस् भनेर उसकी आमाले सोही प्रकारले आचार विचार, रहनसहन र व्यवहार गर्छिन् । यस क्रममा शान्त र प्रसन्नचित्त रहेर आमालाई अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ ।
बालकको जन्मसँगै जातकर्म संस्कार गर्नाले शिशुका कुनै पनि प्रकारका दोष हट्छन् । यसअन्तर्गत शिशुलाई मह र घीउ चटाउने गरिन्छ । सँगसँगै वैदिक मन्त्र उच्चारण गरिन्छ ताकि बच्चा स्वस्थ र दीर्घायु होस् ।
जातकर्मपछि नामकरण संस्कार गरिन्छ । नाम व्यक्तिको पहिचानको आधार पनि हो । नाम राख्ने कर्म पनि हिन्दु शास्त्रमा एउटा विधिका रूपमा रहेको छ । शिशु जन्मिएको ११औँ दिनमा नामकरण अर्थात् न्वारन संस्कार गरिन्छ ।
ज्यातिषशास्त्रका अनुसार बच्चाको नाम निर्धारण गरिन्छ ।
धेरै मानिस आफ्ना बच्चाको नाम जे पनि राखिदिन्छन्, जुन गलत हो । उसको मानसिकता र उसको भविष्यमाथि यसको असर पर्ने गर्छ । जसरी राम्रो कपडा पहिरिँदा व्यक्तित्वमा निखार आउँछ, त्यसरी नै राम्रो र सारगर्भित नाम राख्नाले सम्पूर्ण जीवनभर व्यक्तिलाई त्यसको प्रभाव पर्छ ।
बच्चा जन्मिएको चौधौँ महिनामा निष्क्रमण संस्कार गरिन्छ । निष्क्रमणको अर्थ हुन्छ, बाहिर निकाल्नु । हाम्रो शरीर पृथवी, जल, अग्नि, वायु र आकाशबाट बनेको छ, जसलाई पञ्चभूत भनिन्छ ।
यस कारण पिताले यी देवताबाट बच्चाको कल्याणका लागि प्रार्थना गर्छन् । साथै कामना गर्छन् कि शिशु दीर्घायु र स्वस्थ होस् ।
अन्नप्राशन संस्कार बच्चाको दाँत निस्कने बेलामा अर्थात् ६–७ महिनाको उमेरमा गरिन्छ । यस संस्कारपछि बच्चालाई अन्न खुवाउन सुरु गरिन्छ । सुरुमा बच्चालाई उत्तम प्रकारका अन्न, जस्तै ः खीर, खिचडी, भात आदि खुवाइन्छ ।
शिरको केस पहिलो पटक काट्ने कर्मलाई चूडाकर्म संस्कार वा मुण्डन भनिन्छ । जब शिशु एक् वर्षको हुन्छ, तब वा तीन वर्षमा अथवा पाँच वा सातौँ वर्षमा बच्चाको केस मुण्डन गरिन्छ । यस संस्कारबाट बच्चाको शिर मजबुत हुन्छ तथा बुद्धि तेज हुन्छ भनने विश्वास छ ।
साथै, शिशुको कपालमा रहेका किटाणु पनि यसबाट नस्ट हुन्छन्, जसबाट शिशुलाई स्वास्थ्यलाभ हुने गर्छ । गर्भबाट बाहिर आएपछि बालकको शिरमा मातापिताले दिएको केस नै रहेको हुन्छ भन्ने मान्यता छ । मुण्डानपछि भने त्यो हटेर शुद्धि हुन्छ भन्ने धारणा रहिआएको छ ।
विद्यारम्भ संस्कारको क्रमका बारेमा हाम्रा आचार्यहरूबीच मतभिन्नता छ । केही आचार्यहरूको मत छ कि अन्नप्राशनपछि विद्यारम्भ संस्कार हुनुपर्छ भने केही चूडाकर्मपछि यस संस्कारलाई उपयुक्त मान्छन् ।
अन्नप्राशनपछि नै शिशुले बोल्न सुरु गर्छ । यस कारण अन्नप्राशनपछि विद्यारम्भ संस्कार उपयुक्त लाग्छ । विद्यारम्भको अभिप्राय बालकलाई शिक्षाको प्रारम्भिक स्तरसँग परिचित गराउनु हो ।
प्रचीनकालमा जब गुरुकुल परंपरा थियो, त्यसबेला बालकलाई वेद अध्ययनका लागि पठाउनुअघि घरमा अक्षरबोध गराइन्थ्यो । पितामाता र गुरुजनले पहिला उसलाई मौखिक रूपमा श्लोक, पौराणिक कथाहरू आदिको अभ्यास गराइन्थ्यो ताकि गुरुकुलमा कठिनाइ नहोस् ।
कर्णवेध संस्कारको अर्थ हो– कान छेड्नु । यसका पाँच कारण छन्, एक, आभूषण पहिरिनका लागि, दुई, कान छेड्नाले ज्योतिषका अनुसार राहु र केतुको खराब प्रभाव बन्द हुन्छ ।
यसरी नै तेस्रो, यसबाट अक्युपंचर हुन्छ, जसबाट मस्तिष्कसम्म जाने नसामा रक्तप्रवाह ठीक हुन्छ । चौथो, यसबाट श्रवण शक्ति बढ्छ र केही रोगको रोकथामसमेत हुन्छ ।
पाँचौँ, यसबाट यौन इन्द्रिय पनि पुष्ट हुने गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
यज्ञोपवितलाई उपनयन वा जनेऊ संस्कार पनि भनिन्छ । प्रत्येक हिन्दुले यो संस्कार गर्नुपर्छ । उप भन्नाले साथ र नयन भन्नाले लिएर जानु भन्ने अर्थ लाग्छ ।
गुरुले साथमा लैजाने काम नै उपनयन हो । आज पनि यो परंपरा जारी छ । यज्ञोपवितमा तीन सूत्र हुन्छन् । यी तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु र महेशका प्रतीक हुन् । यस संस्कारबाट शिशुलाई बल, ऊर्जा र तेज प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ । साथै बच्चामा अध्यात्मिक भाव जागृत हुने विश्वास पनि गरिन्छ ।
यसअन्तर्गत व्यक्तिलाई वेदका बारेमा ज्ञान दिने गरिन्छ ।
केशान्तको अर्थ हो, केसको अन्त्य गर्नु वा समाप्त गर्नु । विद्या अध्ययनपूर्व पनि केशान्त वा मुण्डन गरिन्छ । शिक्षा प्राप्तिअघि शुद्धि आवश्यक छ, ताकि मस्तिष्कले ठीक दिशामा काम गरोस् । प्राचीनकालमा गुरुकुलबाट शिक्षा लिएपछि पनि केशान्त संस्कार गरिन्थ्यो ।
समावर्तन संस्कारको अर्थ हो, फेरि आउनु वा फर्किनु । आश्रम वा गुरुकुलबाट शिक्षा प्राप्त गरेपछि व्यक्तिलाई फेरि समाजमा फर्काउनका लागि यो संस्कार गरिन्छ । यसको आसय हो, ब्रह्मचारी व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा जीवनको संघर्षका लागि तयार पार्नु ।
उचित उमेरमा विवाह गर्नु जरुरी छ । विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्कार मानिन्छ । यसअन्तर्गत वर र वधु दुवै साथै रहेर धर्म पालनको संकल्प लिँदै विवाह गर्छन् । विवाहद्वारा सृष्टिको विकासमा योगदान मात्र हुँदैन, व्यक्तिको अध्यात्मिक र मानसिक विकासका लागि पनि यो आवश्यक छ ।
यसै संस्कारबाट व्यक्ति पितृऋणबाट पनि मुक्त हुन्छ ।
१६. अन्त्येष्टि संस्कार
अन्त्येष्टि संस्कारको अर्थ हो अन्तिम संस्कार । शास्त्रका अनुसार व्यक्तिको मृत्यु अथवा देह त्यागपछि मृत शरीरलाई आगोमा समर्पित गरिन्छ । आज पनि शवयात्राको अगाडि घरबाट आगो बालेर शवलाई लगिन्छ । यही आगोबाट चिता जलाउने गरिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २८, २०७६, ०८:०६:००
गीत-सङ्गीतमा रमाएका नेता
१५ वर्षको सङ्घर्षपछि दंग भूपू
३३ किलो सुनकाण्डका आरोपी विमानस्थलबाटै पक्राउ
कर्णाली प्रदेश संसदीय समितिमा ४ जनाको उम्मेदवारी
कोरोनाका कारण रोकियो विराटनगरको रथयात्रा
कन्ट्याक ट्रेसिङका क्रममा पोखराको विरौटाका २ जनामा देखियो कोरोना
सिङ्गापुरमा सत्तारूढ दल नै विजयी, विपक्षी दललाई मात्रै १० सिट
आमेजोनले कर्मचारीलाई सेलफोनबाट टिकटक हटाउन लगायो
शनिबार १६ उडानबाट १ हजार ४१४ नेपाली फर्किए
निजी विद्यालयको चेतावनीः शुल्क लिन नपाए सोमबारदेखि अनलाइन कक्षा बन्द